Ma Tahay Macaamiil Macaamiil ah? | Martech Zone
Sabtida, Juun 1, 2013 Khamiis, May 30, 2013 Douglas Karr
Saaxiib, Patrick Gibbons, iyo kooxdiisii ​​at Macluumaadka Walker waxay isu keeneen 10 bayaan oo ku saabsan sirdoonka macaamiisha oo u hibeeyay goob, Noqo Caqli Macaamiil, halkaas oo aad ku wadaagi karto sheekooyinka ku saabsan sida macmiil caqli badan aad tahay.
Muddo sanado ah ayaan baranay xiriirada macaamiisha hadana, laga yaabee in kabadan sidii hore, macaamilku wuxuu sii wadaa isbadalkiisa. Iyagu waa kuwo aad u baahi badan waxayna kaa filayaan inaad taqaanid oo aad u soo dirto alaab iyo adeegyo qaab ku habboon rabitaanadooda iyo baahidooda. Fursado badan ayaa la heli karaa. Beddelka ayaa ka fudud. Shirkadaha aadan waligaa u arkin inay kula tartamayaan waxaa laga yaabaa inay hadda khatartaada ugu weyn yihiin.
Walker wuxuu ku takhasusay sii-haynta macaamiisha iyo istiraatiijiyooyinka koritaanka, isagoo adeegsanaya saadaalin Analytics, tiknoolajiyada jarista, iyo la-talinta khubarada si loo gaarsiiyo natiijooyinka.
Maxay yihiin Baalasha Istaraatiijiyadda Suuqgeyntaada?